माघ ८, २०७८ ०४:४५:५८
‘फूलको विद्रोह’ लिएर आइन् मकवानपुरे कवि अनिता न्यौपाने चैत्र ३, २०७५
मकवानपुरे कवि अनिता न्यौपानेको कृति ‘फूलको विद्रोह' चैत्र १, २०७५
हेटौंडामा विमल बैद्यको कविता संग्रह 'अक्षर सिम्फोनी'को चर्चा यश हेटौँडाको आयोजनामा आज हेटौँडामा नेपालका चर्चित कवि विमल बैद्यको कविता संग्रह “अक्षर सिम्फोनी” माथि चर्चा भएको छ । न्युज क्लब नेपाल हेटौँडामा भएको कार्यक्रममा “अक्षर सिम्फोनी” चर्चा भएको हो । फाल्गुन २०, २०७५
लाहुरेनी फूल ‘बत्तिस्नी त छैन रे है !’ सानो गाउँ, हल्ला हुन कतिबेर लाग्थ्यो र ? लागेन । असारको महिना, उसै कामको चटारोले सबैलाई लखेटिरहेकै थियो । बिहानको एघार बजेतिर गाउँलेहरु मेलोबाट फर्किसकेका थिए । कोही खाना खाँदै थिए, कोही हतारै गाईबाख्रालाई चरनतिर लखेट्दै थिए । कोहीचाहिँ फेरि मेलोतिरै पस्दै थिए । यस्तो कि जिन्दगी नै हतारोजस्तो, उसै नि गाउँघरमा खानेबेलाबाहेक घरबस्ने फुर्सद कहाँ हुनु र ? पुष १४, २०७५
कविता : काँडा र गुलाफ थाहा छैन काँडालाई, काँडासँग गुलाफ फुलेको हो या गुलाफसँग काँडा । तर यति थाहा छ काँडालाई सधैं सधैं गुलाफसँगै रहनु छ उसको अंगरक्षक भएर । पुष १४, २०७५
गजल : टुट्यो नीद बेचैन पा-यौ तिमीले गजल टुट्यो नीद बेचैन पा-यौ तिमीले लुट्यौ चैन जम्मै निखार्यौ तिमीले । सधै चित्त तड्पेर आनन्द जल्छ विनाफूल सौन्दर्य सार्यौ तिमीले । पुष १४, २०७५
'साउथ एसिया चाइना जिओ-इकोनोमिक्स' सार्वजनिक 'काठमाडौं स्कूल अफ ल'का प्राध्यापक एवं पूर्व महान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौलाको पुस्तक 'साउथ एसिया चाइना जिओ-इकोनोमिक्स' शुक्रवार सार्वजनिक भएको छ । ५७६ पृष्ठको उक्त पुस्तक १५ वर्षको अथक प्रयासपछि तयार भएको प्राध्यापक संग्रौलाले बताए । पुष १४, २०७५